Ogaden News Agency (ONA) – Colaad Xoogan oo Kasoo Cusboonaatay Xaduuda Canfarta Iyo Axmaarada.
Colaad Xoogan oo Kasoo Cusboonaatay Xaduuda Canfarta Iyo Axmaarada.
Posted by Dulmane	/ August 26, 2018
Waxaa wali xuduuda Gobolada Axmaarada iyo Canfarta kataagan dhibaatooyinkii iyo dhagartii ay abuureen kooxdii dhiiga shacabka kamushtari jirtay ee TPLF, waxaana lagu soo waramayaa in aan wali xal loohelin miinooyinkii ay kooxdu aastay.
Sida xogta aan kuhelayno waxay qulqulatooyin xoogan kajiraan xuduuda udhaxaysa qoomiyadaha Axmaarada iyo Canfarta, kuwaas oo sanidihii lasoo dhaafayba ahaa kuwo colaad gacan kurimis ah ay kadhex jirtay laguna waayay naf iyo maal badan.
Qoomiyada Axmaarada oo inta badan lagu eedeeyo in ay weerarka leedahay ayaa lasheegayaa in ay soo weerareen tuulada Own oo dhacda xuduuda labada Gobol halkaas oo sida lasheegayo ay kudileen dad badan isla markaana ay kugubeen masaajid iyo guryo kale oo badan.
Dhinaca kale waxaa lasheegayaa in ay weerar qaadeen maleeshiyo katirsan qoomiyada Canfarta kuwaas oo iyaguna laayay dad aad ubadan oo xabashi ah halka duunyo badana ay dhaceen, waxaana lasheegayaa in ay deegaankaas ka abuurantay qalalaase xoogan.
Labada qoomiyadood oo taariikh dheer iyo dhaqan wadaaga ayaa lasheegayaa in ladhex dhigay colaad xalkeeda la layahay taas oo kooxdii TPLF ee talada laga faramaroojiyay ay dhex digtay waxaana mudadii ay colaadu jirtay lawaayay maal iyo naf badan.
Kooxdii TPLF ee lacasilay ayaa isku dirtay dhamaan qoomiyadaha dariska ah si guud ahaan wadanka ay colaad uga bilaabato taas oo sida ay filayeen faa’iido iyaga u ah kuna dheeraysan rabeen xukunka waxayna kooxdu kuguulaysatay inta badan qoomiyadihii ay isku direen.
Qoomiyada Oromada iyo shacabka Soomaalida Ogadenia ayaa noqday kuwii ugu khasaraha badnaa waxaana labada dhinac la dhex dhigay colaad gaamurtay oo dad iyo duunyaba baabi’isay.